Beesha Caalamka oo Ku Baaqday in La Isugu Yimaado Shir Degdeg ah – Goobjoog News
Qoraal goordhow kasoo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay tahay la qabto shir degdeg ah oo ku saabsan doorashada.
Qoraalka ayaa u qornaa sidan:
Saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhoweynayaan dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hanaanka doorashada ee 17kii Sebtember.
Wadahadalladii lagu qabtay Dhuusa-mareeb 1-6 Febraayo horumar ayaa laga sameeyay qodobo badan oo muhiim ah, laakiin laguma wada heshiin dhammaan qodobadii taagnaa.
Waxaan aaminsannahay in weli ay suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad, iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin wada hadallo dheeri ah.
Maxaa Loogu Yeerayaa Farmaajo Maanta Kadib?!
Fadhiga Golaha Shacabka Oo Laga Diiday In Uu Ka Soo Qeyb Galo Ra'iisul Wasaare Rooble